मन्त्री हेरफेरबाटै सरकारको असफलता सावित भयोः विश्वप्रकाश - अभियान खबर
धरान । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार असफल भएको पुष्टि भएको जिकिर गरेका छन् । प्रेस युनियन धरानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरेको विषयलाई लक्षित गर्दै भने ‘हामीले भन्दै आएको कुरा आज पुष्टि भएको छ । असफल मन्त्री भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेरेको विषयले यो सरकार असफल भएको पुष्टि नै भयो ।’
उनले सरकारले पुरा गर्न नसकेका कुरा जिम्मेवार प्रतिपक्षीको हिसाबले कांग्रेसले एकएक हिसाब गरेर बसेको बताए । ‘आजको जिम्मेवार प्रतिपक्ष भोलीको सत्तापक्ष हो, हामी चुपचाप यो करणले छैनौँ कि सडकमा कम्युनिष्ट साथिहरुको जस्तो ढुंगामुडा गरेर प्रतिपक्षीको व्यवहार प्रस्तुत गरेका छैनौँ ’ उनले भने ।
प्रवक्ता शर्माले सरकारका कमजोरीलाई लिपिबद्ध गरेर भर्खरै सार्वजनिक गरेको भन्दै अहिले हुन गइरहेको उपनिर्वाचन सरकारले कामको मुुल्याँकन गर्ने अवसर भएको बताए । ‘हामीले भन्नेपर्दैन सरकारप्रति जनताको स्पष्ट धारणा अब मतमा अभिव्यक्त हुन्छ ।’ उनले भने ‘हामीलाई विश्वास छ त्यो अभिव्यक्ति काँगेसलाई अब धेरै दिन प्रतिपक्षमा नबस् भन्ने नै हुन्छ ।’
धरानको उपनिर्वाचन लक्षित गर्दै केन्द्रिय स्तरका नेताहरु धरान आउने क्रम जारी छ ।
विप्लव’का पोलिट ब्यूरो सदस्य ढकाल पत्रकार सम्मेलनबाटै पक्राउ
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष एवम् नेकपाका पोलिट ब्यूरो सदस्य चिरञ्जीवी ढकाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ११ विद्यार्थी संगठनले अनामनगरमा रहेको युनियन हाउसमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । त्यहाँ नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल पनि सहभागी हुने सुइको प्रहरीले पाइसकेको थियो । पत्रकार […]
ट्रान्सकिप्ट के हो ? कसरी बनाउने ?
कक्षा ११/१२ मा प्रत्येक विषयमा D+ वा सो भन्दा धेरै ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले यहि श्रावण २८ गते देखि ट्रान्सकिप्टको लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । के हो ट्रान्सकिप्ट ? कुनै पनि बिद्यार्थीले ११ र १२ मा प्राप्त गरेको अंक सहितको औषत निकालेर दिने कागजलाई ट्रान्सकिप्ट भनिन्छ । जस्तो तपाइँको ११ मा जीपीए ३.४ र १२ मा […]